Mid Ka Mid Ah Xiddigaha Burnley Ee Xalay La Ciyaaray Liverpool Oo - Axadle Wararka Maanta
Kooxda kubadda cagta Burnley ayaa shaacisay in xabsiga bathroom taxaabay mid ka mid ah xiddigaheeda markii ay soo dhamaatay ciyaartii Fulham ee toddobaadkii hore ka hor intii aan xalay lagu soo darin liiska ciyaartoyda kaydka ee kulankii Liverpool.
Ashley Barnes ayaa kaydka fadhiyey kulankii Liverpool ee kooxdiisa ay guul-darradu kasoo gaadhay, laakiin waxa uu hormood u ahaa laacibiintii guusha usoo hooyey naadiga ciyaartii Fulham ee kasii horreysay.
Weeraryahankan ayay ciidamada boolisku qabteen isagoo baabuurkiisa wata, isla markaana kusii jeeda gurigiisa, waxaana isagoo waddada maraya joojiyey booliska oo waddada taagnaa, waxaanay ka qaadeen tijaabo lagu hubinayay haddii uu khamri cabsanaa.
Goobta lagu joojiyey laacibkan ayaa waxyar u jirtay gurigiisa Cheshire, waxaana markiiba bathroom kaxeeyey saldhig boolis oo lagu xidhay kaddib markii lagu helay in uu cabsanaa.
Waqtiga la xidhay ayaa ahayd saacadihii hore ee subaxnimadii saaka, taas oo ka dhigan in habeenkaas oo dhan uu kusoo jeeday goobo khamri laga cabbo.
Warfare-saxaafadeed ay boolisku soo saareen ayay ku sheegeen, in abaarro 3dii habeennimo ee saacadda UK ay joojiyeen gaadhi midabkiisu madow yahay oo Mercedes V220 ah, kaas oo uu watay Ashley Luke Barnes oo khamri cabsanaa.
Dhinaca kale, Burnley aaya war-saxaafadeed ay soo saartay waxay ku sheegtay in ay ka war-hayso in la xidhay Ashley Burnley, ayna ciyaartoydeeda ka filayso, loogana baahan yahay in ay u dhaqmaan sida ugu habboon, iyagoo ilaalinaya qiyamka iyo sharafta kooxda iyo toodaba.
Waxa kale oo ay kooxdu sheegtay in ay tallaabo sharci ka qaadi doonto, isla markaana ganaax lagu ridi doono laacibkan.